पढेको हुबहु सम्झिने र पढ्न जाँगर चल्ने यी सरल तरिका - Nepal Insider
Home/समाचार/पढेको हुबहु सम्झिने र पढ्न जाँगर चल्ने यी सरल तरिका
काठमाडौ । धेरै विद्यार्थीहरुको मुख्य समस्या पढ्न बस्दा निन्द्रा लाग्छ । भन्नुको अर्थ के भने विद्यार्थीलाई किताब पढ्न मन लाग्दैन बरु उनीहरु फेसबुक पढ्न मन पराउँछन् । यो बच्चा देखि युवा हरेकमा देखिने गम्भीर खालको समस्या हो । सानै देखि मोबाइल, टिभीसँग नजिक भएका बच्चाहरुलाई किताब हेर्न मन लाग्ने कुरा पनि भएन् । अर्को नेपालमो शैक्षिक प्रणाली पनि राम्रो छैन
विवाहकै दिन गुल्मीमा यो जोडीले गर्यो अचम्मको काम !
गौतम बुद्ध रंगशाला निर्माणलाई १३ बर्षिय निमेशले गरे ५० हजार सहयोग
ललितपुर काण्ड-अन्जनाकै कारण हत्या? भयो सनसनिपुर्ण खुलाशा, बास्तबिकता यस्तो(भिडियो )